Warshadda Qalabka Caafimaadka, Shirkadaha Alaabada - Soosaarayaasha Qalabka Caafimaadka ee Shiinaha
Qiimaha warshadda UL ayaa ansixisay aaladda baaritaanka qalabka baaritaanka raajada 22.2v 900mah
Waxaan bixinnaa sicirka Warshad UL oo la ansixiyay 22,2v 900mah qalabka falanqaynta ee baakidhka batteriga Xirmada batteriga waxaa loo adeegsan karaa raajo, Daloolin wireless, qalab falanqeyn, qoriga duugista ama codsiyada kale ee ku habboon. Cabir yar oo leh awood dhab ah oo sare. gudaha si aad u ilaaliso batteriga cimri dheeri iyo badbaado.Besides, batteriga loo oggolaaday UL, CB, IEC62133, PSE, KC, UN38.3, MSDS, shahaadada RCM sida macaamiisha loo baahan yahay.Waxaan soo saarnaa baytariyada lithium ee dib loo isticmaali karo, gaar ahaan xirmo jilicsan oo leh tamar sare iyo unugyada amniga, batteriga qalooca iyo baakadaha, iyo sidoo kale batteriga qaan-gaarka ah, sida Lithium thionyl chloride, Lithium Manganese. Waxaan sidoo kale habaynay baakadaha batteriga, baytariyada kaydinta. Inta badan macaamiisheena ka yimi Yurub, Aasiya, Kuuriya, Ameerika, Jabaan, Kanada iwm. Fadlan xor u tahay inaad nala soo xiriirto markaad u baahato batteriga.
Asalka 24V 13.5Ah Bateriga Li-ion ee Dib-u-Soo-Kordhinta ee Loogu Talagalay Dhallaanka OEM & ODME
Waxaan bixinaa 24V 13.5Ah Li-ion Batrool Dib-u-buuxin kara oo loogu talagalay Neonatal Incubator OEM & ODME .Bakhda batteriga waxaa loo isticmaali karaa Neonatal Incubator, Customized la aqbali karaa iwm Shirkadda PLM waxay leedahay kooxda kormeerka tayada xirfadeed, nidaamka baaritaanka oo dhameystiran iyo kaamil, nidaamka, nidaamka socodka hawlgalka sayniska. Laga soo bilaabo walxaha soo galaya ee batariga, wax soo saarka, shixnadaha, adeegga iyo xiriirada kale si adag ayaa loo xakameeyaa, iyagoo raacaya sharraxaadda nidaamka ISO9001: 2000, dammaanad qaadka tayada wax soo saarka. Oo maray ISO9001: 2000, CE, ISO14001: 2004, RoHS, UL iyo shahaadooyin kale.And our inta badan macaamiisha ka Europe, Asia, Korea, America, Japan, Canada iwm Fadlan si xor ah u nala soo xiriir markii aad u baahan tahay batteriga .
Warshadda PLM 6Ah 18650 4S Difaaca PCB 14.8V Li-ion batari dib loo soo celin karo
Waxaan nahay warshadda PLM 6Ah 18650 4S Difaaca PCB 14.8V Li-ion batari dib loo soo celin karo.Xirmada batteriga waxaa loo adeegsan karaa Monitor, Power Power, pump pump, Ultrasound detector, Cilmaan gaar ah oo la aqbali karo iwm Waxaan nahay soosaarayaasha baytariyada waxay bixin karaan dhammaan noocyada lithium ee dib loo isticmaali karo. xirmooyinka batteriga iyo macaamiisheena inta badan ka yimaada Yurub, Aasiya, Kuuriya, Ameerika, Japan, Kanada iwm Fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto markaad u baahato batteriga.
Warshadda PLM 2200mAh 18650 waxaa lagu dhisay gudaha PCB-ga la ilaaliyo 3.7V Li-ion Lithium 1S batari dib loo soo celin karo
Waxaan bixinaa warshad PLM ah 2200mAh 18650 oo laga dhisay gudaha PCB-ga badbaadsan 3.7V Li-ion Lithium 1S batari dib loo soo celin karo. Xirmooyinka batteriga waxaa loo adeegsan karaa Endoscope, Mini Fan, Toosh, Toosh, Alaabta Ciyaaraha iwm .Waxaan sameyn karnaa xirmada baateriga adeegga OEM & ODM, fadlan dareeme bilaash inaad na soo ogeysiiso arjigaaga iyo faahfaahintaada.